Fiteny tigrinia - Wikipedia
Ny fiteny tigrinia dia fiteny hamitô-semitika isan'ny fianakaviam-piteny semitika sady tenenina indrindra ao amin'ny faritra avaratra atsinanana ao amin'ny Tandrok'i Afrika. Atao hoe ትግርኛ / tɨɡrɨɲa io fiteny io amin' ny fiteny tigrinia. Izy no fiteny ôfisialin' i Eritrea sy ny fanjakam-paritr'i Tigray ao Etiôpia.
Misy mpiteny tigrinia miisa 4 320 000 ny ao Etiôpia tamin'ny taona 2007, miisa 2 540 tao Eritrea tamin'ny taona 2006, ary 6 915 000 ny fitambaran'izy ireo maneran-tany. Matetika izy no atao fiteny faharoa, na ao Eritrea sy ao Etiôpia, na any amin'ny faritra atsimo-atsinanana ao Sodàna Avaratra, sy any Jibotỳ, ka izany dia tsy ahalalana marina ny tena isan'ny mpiteny tigrinia.
Ny fiteny tigrinia, sahala amin'ireo fiteny hafa ao amin' ny Tandrok' i Afrika, dia soratana amin' ny alalan' ny abidim-baninteny gezy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_tigrinia&oldid=1013474"